GOG ine zvipo zvakakosha mumitambo yemavhidhiyo yakamirira iwe | Linux Vakapindwa muropa
Takataura nezvechitoro chiuru GOG mitambo yemavhidhiyo, kwaunowana akawanda mazita eLinux, sezvazvinoitika paStam. Zvakanaka, ikozvino unogona kubatsirwa nezvakakosha zvinoderedzwa pamazita anosvika gumi nemashanu muzana muchitoro cheRazer kana iwe ukatenga panguva yemutambo wePoland mutambo.
Uye Mutambo weMitambo wePoland une chekuita nei GOG, kune avo vasingazive, CD Project (hongu, vagadziri veCyberpunk 2077) mutambo wevhidhiyo mutambo wakavakirwa muPoland, uye izvi ndizvo muridzi weGOG. Ndokusaka ivo vaita izvi zvipo zvinowirirana, zvichiratidza kuti nyika yeEast nderimwe remasimba enzvimbo yemitambo muEurope.
Rangarira kuti CD Projekt haisi yega inotungamira kambani yekuvandudza vhidhiyo munyika, zvakare Bloober Team, Teachland, 11bit, pakati pevamwe ...
Zvakanaka, pakati pezvipo, pane zvinoderedzwa zve kusvika ku80% pamitambo 200 kusvika Chivabvu 10. Uyezve, mu webhu Kubva kuGOG, mushure mekutenga chero mutambo, iwe unogona kunyorera kune tsamba kuti ugamuchire 15% mitengo pamutero weRazer Store.
Kana ari mazita aripo, une zvimwe zvakafanana:
Shadow Warrior (2013): ine dhisikaundi ye80%.
Ruiner: inowanikwa ne75% dhisikaundi.
Shongwe yenguva: iko kupihwa kunokwira -75%.
Bheki: Inoderedzwa ne74%.
Nerima: kuderedzwa pane zita iri i66%.
Rubatsiro Ruchauya Mangwana: unogona kuitenga iyo -65% izvozvi.
Isu. The Revolution: iyo dhisikaundi inosvika 65% zvakare.
kupisa kwakanyanya: mune ino kesi kuderedzwa kwe60% kunoiswa.
SUPERHOT: Pfungwa DZIDZISO Bvisa: Iyi vhidhiyo yemutambo zita inogona kuve yako ye60% pasi.
Vampire: Iyo Masquerade - Makateti eNew York Deluxe Edition: -55% ndizvo zvine uyu mumwe.
CARRION: uye ini ndinovhara rondedzero neimwe iine -33% kuderedzwa mumutengo wayo wenguva dzose.
Uye mamwe akawanda mazita uye zvinopihwa muRazer peripherals chitoro, icho chine zvinonakidza zvemitambo zvigadzirwa, asi zvakadhura (Tora mukana izvozvi!) ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » GOG ine akakosha emavhidhiyo mutambo madhiri akamirira iwe